1- Sport scolaire
Etsy ankilany kosa, dia raisina ho tanjaky ny firenena ny hananana tanora manao fanatanjahan-tena sy beazina ao anatin'izany toe-tsaina sportif izany:
Manaraka fitsipika, mahafehy tena, manaja ny hafa, tsy manaiky ho resy tsy miady, manana tanjona, mikiry hatrany, mitsangana raha lavo, tsy mitaraina reraka, manao fanazaran-tena, ary manaiky resy sy manandratra ny mpandresy, mifankatia sy mifanome tanana ao anatin'ny firaisan-kina, toe-tsaina mpandresy, izay mahay no miakatra. (Culture de réussite, de performance et du résultat).
Atomboka any ampianarana izany, ka dia hibahan-toerana amin'ny programam-pampianarana ny fanatajahan-tena, hisy ny tournoie inter-scolaire, inter-Fokontany, inter-Kaominina, inter-Faritra.
Hiantohan'ny Fanjakana manontolo izany fifanakalozana eo amin'ny tanora izany, na amin'ny alalan'ny sport na amin'ny alalan'ny voyage d'étude na amin'ny alalan'ny kolotsaina.
Izay mahay sy tompondaka no alaina ampidirina amin'ny sekoly ambony momba ny sport, izay ajoro amin'ilay Oniversité 3 lehibe, iray isaky ny Faritra, Avaratra, Afovoany, Atsimo.
Hiadiana ny kolikoly sy ny kitranoantrano, na amin'ny safidy mpilalao, na amin'ny fandehanana mivoaka any ivelany. Tsy ekena intsony ny ray amandreny sy ny mpikarakara no maro noho ny tanora sportif mivoaka any ivelany, ka lasa resam-pianakaviana sy fitsangatsanganana fotsiny no maro.
2- Centre complexe sportif
Hisy Centre complexe sportif lehibe amin'ireo Oniversité 3 eo anivon'ny Faritra ireo, ka andray bourse toy ny universitaire Bac+3 ireo sportif ireo, 250 000 ariary isam-bolana, miampy trano, cantine.
Sady hianatra izany ireo, no hiofana amin'ny taranja sport misy azy.
3- Sportif professionnel
Ho professionnel ireo tanora ireo. Andray karama toy ny Service National rehefa mivoaka ny fianarana.
1 000 000 ariary isam-bolana ny karama, miampy ny prime sport sy izay hifanarahana amin'ireo sponsoring sy ampahany amin'ny publicité sy droit à l'image amin'ny audio visuel.
Hiditra amin'ny Ekipa Nasionaly.
Tanjona ny akana coupe d'Afrique amin'ny taranja 4 ao anatin'ny 5 taona. Ary fandraisana anjara coupe du monde sy médaly amin'ny jeux olympiques manaraka.
Azon'ny tanora manana kilemana na Handisport atao avokoa ireo toerana rehetra ireo, ary azony hidirana tsy misy sakana.
Hisy ihany koa mpianatra Handisport, na ireo tanora manana kilemana hiditra ho hisan'ireo sangany professionnel amin'ny taranja misy azy.
5- Materiel sportif
Omena tosika ireo orin'asa mpanamboatra materiel sportif, na ho an'ny handisport ihany koa.
Vatsiana fitaovana fanaovana sport ny sekoly, Club, Féderation.
6- Nouvelle ville écologique et sportive
Hisy nouvelle ville écologique et sportive isaky ny renivohitry ny Faritra telo, ka dia toerana amina hectare maro, ho maitso mavana, izany no hivelaran'io Centre complexe sportif io, hisy sekoly lehibe hanofanana ny mpanazatra, ny arbitre, ny mpitantana ny fédération sy ny club, ho an'ny mpianatra sy sportif.
Hisy trano tsirairay mitokana hipetrahan'izy ireo, 9-12m² ny an'ny mpianatra, afaka mandray fianakaviana kosa ny an'ny mampiofana, ny arbitre, ny mpitantana club, ny coach, ny dokotera sportif...
7- Médecine sportive
Hisy lalampiofanana manokana ho an'ny fitsaboana ara-panatajahan-tena sokafana amin'ilay Oniversité 3 lehibe, hisy sampana manokana ny hopitaly lehibe atsangana ao momba ny fandraisana ireo sportif maratra na marary na mila fitsaboana manokana, centre de rééducation.
8- Ady amin'ny zava-mahadomelina, ny toaka, ny sigara, ny paraky ary ny dopage
Ireo tanora professionel tratra misotro toaka, mifoka sigara na rongony na manao dopage dia voaroaka avy hatrany.
Asiana toerana manokana hitsaboana ny tanora difotra ao anatn'ny sigara, toaka, rongony.
9- Télévision et radio nationale Sport
Hatsangana ny Télévision sy Radio Nationale Sport, izay resaka sport sy tanora ary kolotsaina fotsiny no andeha ao.
10- Sport Malagasy
Maro ireo fanatanjahan-tena isam-paritra Malagasy nefa tsy tafiditra anatin'ny discipline olympique, toy ny Morengy, savika... ka dia ampiana ihany koa izy ireny hanana ny toerany eto amin'ny Firenena.
Tetibola sy ny famatsiam-bola